Juneeydii Saaddoo: Dhiifaman Gaafadha.. – Welcome to bilisummaa
Juneeydii Saaddoo: Dhiifaman Gaafadha..
bilisummaa March 8, 2016	6 Comments
Ani Juneeydi Saaddoo Cirrii Siyaasaa Ummata Oromoo keessattis ta’ee siyaasa biyyatti keessatti haala adda addaatiin bara 1976 irraa jalqabee hirmaachaan turee. Dhaloonni kiyyaa Godina Arsii, Dheerinna Gaara Cilaalo gara bahatti, labbaa Tulluu Denestari jedhamtu, ollaa Tullu Begoo, ganda Sheemachaa keessattidha. Akka waligalaatti Godina Arsii keessa waggoota gara 19 yo jiraadhu, Finfinne keessammo waggota 32 jiraadhee. Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee.
Bara 2000 irraa jalqabee sadarkaa hoggansa ol’aanaatti Oromiyaafi biyyattidhaaf hojjachaan turee. Syaasaa biyyatti keessatti, bara 1991 booda adeemsifamaa turee, kallattiidhaan akka miseensaatti kan hirmaachuu jalqabee bara 2001dha. Baatii Qaam’ee 2001 Magaaalaa Naqamtee keessatti Yaaii OPDOn adeemsifteerratti miseensaafi hogganas ta’e filatame. Ergasi ka’e hanga Onkololeessa 11, bara 2012tti siyaasaa biyya sani keessaa qooda qabaachuun kiyya ifaa. Rakko bara 2012 guutuu na mudataa tureerraa kan ka’e, gara baqaa deemudhaan kunoo amma Ameerikaa keessattin argamaa.
Ibsii asi gaditti dhiyeessu, seena kiyya dabre keessaa wantoota gabaabdu qofa Ummata biyya keessa jirufi biyya alaa jiruf dhiyeesudhaan Saba Oromoo dhiifama gaafachuudhaafi.
Yeroon kuni bara dhaladhee kaasee hanga mana barnoota Yunivarsitii Finfinnee xumurutti kan ilaaludhaa. Ilma qonnaan bulaa, baddaa Arsitti jireenna hamaa Ummanni keenna keessa jiraatu keessatti dhalachu qofa oso hintayiin seenaa, odeeffanno, rakkoo fi makko ummatichaa kan na waliin dhalate keessatti waggota 5niif mana barnoota sadarkaa 1ffaa, magaalaa Loodee-Jimaataatti Kiloometrii 12 deddebi’udhan baradhee. Bara Sochiin barattota Yunivarsiti jalqabuu, ani sadrakaa 1ffaa keessan turee. Bara HSn kufuu kutaa saddet turee. Labsii lafa baadiyyaa gammachuudhaan fudhachuudhanis hirira qabsoo, isa jalqabaa, keessatti uf argee. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal’ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. Manni barnootas akka cufamu hiriiroota adda addaa keessatti qooda fudhachuudhaan barnoota dhaabee gara Magaalaa Hurutaa deebi’udhaan sochii lafa jalaa bal’aa adeemsiissa turee. Bara ittiaanuu dirqamaan gara mana barnoota nudeebisaniyyu sochiin kuni itti fufee. Dargiin ijoollee hiriyyoota kiyyaa heddu hidhuun, ajjeesufi tumuun (torcher) (goolii diimaa), qabsoon kuni akka laamshayu taasiisee. Waggoonni lamaan hafan, bara “siyaasaa fi Korreenti fagootti” jedhamee namni hundi mataa gadi qabate turee. Bara 1981 yeroo jalqabaatiif gara Finfinnee deemudhaan Kaampaasi Kiilo 4 seenudhaan barnoota itti fufee. Waggoonni 4n kunniin yeero “politically dormant” ittiin tureedha.
Bara Hojii Ogummaa
Bara 1984 irraa kaasee hanga 1991tti, seektara bishaani keessatti hojjachaan turee. Yeeroma kana, waggota lamaaf gara Ingiliiz (Fuulbaana 1987) deemudhaan barnoota digrii lammaffaa waa lamarratti wagoota lamaan kessatti barachuudhaan gara biyyaatti deebi’ee. Waggota 7n kana keessatti Dargii hamachuufi jibburra dabree wanti qabatamaan godhee hinturree. Marii guyyota Jimaataa hunda waajjiraalee motummaa keessatti adeemsifamanirraa hafuu, buusii adda addaa diduufi seera laaffisurra waan dabre hinhojannee.
Bara 1991 yeroo Dargiin kufuu ani waajjira bishaan Magaalaa Finfinne keessatti Projektoota gugurdorrattiin hojjachaa turee. Yeroo bishaan Finfinnee keessa hojjadhuu, magaalaa Finfinnees akka baru carraa guddaan argadhee. Maastar Pilaani 1990-2006 hojjatamee kessattis qooda fudhadheen turee. Ilaalchi magaala sana maal akka ta’e, fedhiinifi hawwiin maal akka ta’e kan baree yeeroo sana turee. Jijjiramicha 1991 akka gaaritti fudhadheen garummo ufeggannodhaan ilaalaa turee. Naannoleen Afaaniifi Aadaa isaanitiin uf habulchan, seenaan Itophiyaa waggaa dhibba tokko qofa, hire ufi ufiin murteeffachu, hacuucaa sabummaa fonqolchuu, lafti akka hingurguramne, kkf dhimmoonni anaaf ijoo tayan kun sirnicha haraya dhufe kanaaf gurra akka keennu nataasiisee.
Bara 1995 Jia Adooleessa, Mootummaan Naanno Oromiyaa, kan OPDOn gaggeeffamu nawaamudhaan seektara Bishaaniifi Albuudaa akkan hogganu nagaafatee. Gaaffi kana fudhachuudhaan Hojii naanno keennaa jalqabee. Yeero kanatti namni waan miseensummas taye waan biraa natti kaase hinturree. Hojii bishaani garaa guutuudhaan itti uf gadiidhiisee hojjadhee. Biiroo deebiseen akka gaaritti ijaaru, caasaa godinaalee cimsuu, sirna sivil sarvisi diriirsuu, ogeessa baliinaan qaxaruu, ogeessa baliinaan biyya keessaafi biyya alaatti ergani horachuu, sirna hirrigaa fi qabeenna motummaa hannaaafi saamicharraa tiksuu kan dandyu sirna ijaaruu, koontraatoota gurguddo biyya alaatiifi biyya keessa raawwachuudhaan dhiyeessiin bishaan dhugaatii baadiyyaa fi magaaloota Oromiyaa keessatti akka diriirfamu tasiisuu fi kkf hujeen jiraa. Sadarkaa biyyaa qofa oso hintaanee sadarkaa Afriikaatti ilaalamu kandandayan hojileen gurguddoon hojjatamani jiruu. Lafa Oromoo, ganda Oromoo, kan dur essa jiraan hinbeekkamne, Moyaalee kaasee hanga Cinaaksan, Hidhabu Aboteeti kaasee hanga Mandiitti, badda fi gammojji barachuu, nama barachuu, rakkoo qabatamaa hiikudhaan Ummata kiyya bira dhaabbadheen jiraa. Lafa ABOn keessa jiru hindeemiin oso naan jedhan lafa akka Gawgaw, Breeda Leenca, Milqaay, Raayituu KKf keessa deemeen hojjadhee jiraa. Uf keenne hojjadhee. Ennuyyu gammachiisuuf miti. Caasaa Oromoo kan lubbu qabu tokko ijaaru kiyyattis gammachuun qabaa. Haala Kanaan uwwisa bishaani dhibbentaa gara 15 qofa turee waggota shanan keessatti dhibbentaa 41 olitti kaasuun dandayameera! Hojjattootafi ogeessota bishaan Oromiyaa yoomiyyu hinirranfadhuu!
Bara paartii biyya bulchaa jiru keessatti rakkoon baqaquu ka’e, ani dame dinagdee Naanichaan hogganaa turee. Gara dhumatirrattis haala heeddu rakkisaa tayee keessatti hojiwwan dame kiyyaa qofa oso hintayiin kan dameelee heddu (kan waajjira Preezidaantichaas dabalatee) halkani guyyaa hojjachuudhaan Waajjirri Motummaa Naanoo Oromiyaa akka hincufamne taasiseen turee.
Akka seensa kiyyarratti dubbadheetti, bara 2001 Jia Onkololeessaa keessa, Preezidaantii naanichaa tayeen Caffeedhaan Filatamee. Hojiwwan walxaxaafi rakkisaa tayanis hojjachuu kan jalqabee yoonarraa kaaseetii. Yeeroon kuni yeeroo motummaan jiddugaleessatiifi kan naannolelle heddu dadhaban turee. Motummaan maqaa malee caasaan isaa hinhojjatu turee. Mormiin Ummataa gara hundaan akka ibiddaatti bobayaa turee. Haala kana keessatti hojiin hojjadhee, hanqinoota turan, dogongoroota turaniifi badilee turan akka itti aanutti Ummataaf dhiyeessaa:
Haalli hojii naannicha hogganuuf itti fudhadhee akka salphaatti hinturre. Waggaa tokkoo lama dura barnoota dooktarummaatiif biyya Ingliiz deemen erga egaleen booda rakko mahallaqa mana barnootaarratti na qunnameerra kan ka’e biyyatti deebi’ee mahallaqa gara Dolaara kuma 54 dhaabbolee adda addaarra ergan walitti qabeen booda motummaan deemsa naa’eyyamuu waan dideef hafee. Haa tayu malee deebi’ee deemuuf fedhii guddaa waan qabaachaa tureef yeroo hojiin Preezidaantumma natti kennamu mormii torban tokkoo olif, marii ta’amaa turerratti, dhiyeessen jira. Haa tayu malee sochii naannicha keessatti adeemsifamaa tureerraan kan ka’e namni hundinuu (gaggeesitoonni OPDO) naannorratti ramadamani hojjachuudhaaf diddaa waan agarsiisaniif ani hojii kana akka hojjadhu murtaayee.
Erga hojitti seeneen booda garaa guuraa hinhojjannee. Caasaafi motumma Ummata Oromoo kan lubbu qabu ijaarudhaaf carraaquttin seenee. Akkaa amantaattis biyya Itophiya keessatti sirni bulchiinsa Fedeeraalizimi kunii haqaan hojirra yo oole, Ummanni keenna mirgi isaa kabajamu dandayaa, kanaaf immo nuti Oromoonni ufii keenna “prove” uf godhu qabna, biyyarraa baqachuudhaan, ummatarraa addaan ciccituudhaan bu’aan dhufu hinjiru, rakkoon siyaasaa OPDO keessattis tayee, OPDO fi dhaabbolee biraa jiddutti jiraachu nidandaya, ha tayuti garuu, qabsoo dimookraatawaa, qabsoo olaantummaan seeraa keessatti kabajamu, qabsoo mirga hiree keennaa ufi keennaan mirkaneeffachu itti dandeennu karaa nagayaatiin adeemsiisudhaan carraa Saba Oromo jijjiiru nidandeenna, jijjirus qabna jedheen itti amanee hojjadhee.
Oromoon uf bulchuu hindandayu kan jedhamu furshii taasiisudhaan caasaa ufitti amanuufi ummataa isaa bulchu, rakko isaa hiikuu dandayu ijaarudhaaf guddaa dhama’een ture.
Haala Kanaan qaamolee sadan motummaa (qaama raawwachiiftuu, qaama seera baasuufi qaama seera hiikuu/mannen murtii) akka addaan bahani ijaaraman, yeero jalqabaatiif taasifneerra. Qaamoleen kunii mirga guutuu qabaatuu baatanille, tarkaanfii karaa sirrirratti fudhatameedhaa. Caasaa Motummaa gutumatti akka haarayaatti deebifnee ijaaruu, Naannichi kaabineen akka hogganamu taasiissuu, caasaa godinaaleefi kan aanootas kaabineen akka hogganaman taasissu fi humna namaatiin hanga dandayameetti akka guutaman taasifneerra.
Beela biyyattirratti bu’e (bara 2001-2003 nama miliyoona 13-14ttu beelaaf saaxilame) ilaalchisee Ummata Oromoo Miliyoona 3.8 beelawee turee, oso balaan hamaan nuhinqunnamiin toyachu akka dandayamu aantummaafi kaka’umsa sabbonummaa guddaatiin caasaan naannicha hundi hirmaanna guddaa akka taasiisufi balicha akka dhaabbatu taasifneerra. Seena biyya sani keessatti waggota lama keessatti qofa namoota kuma 300 oli qubachiifneerra. Yeroo Dargii, waggota heeddu keessatti nama kuma 600 qofa (sanummo akka biyya guutuutti) kan qubachiisan yo tayeelle, dhumarratti qubannaan sun, %85 kan fashalaaye tayuun niyaadatamaa! Baroota 2002-2003 garuu, naannoon Amaaraafi Naanoon Tigraayi ummanni waan dideef, kan qubachiisu dandayaan namoota kumoota kurnaniin laakkayamanidha. Oromiyaan maaliif milkoyte? Yeero jalqabaatiif Ummanni Oromoo qubachu barabaadufi waan nuti (bulchiinsii naannicha) jennu nu amanurrayi. Kana malees tokkummaafi birmannaa Ummanni keenna walii godhuu qabatamaan waan argeefidha. Warra tokkummaa keenna shakkuufis deebii amansiisaa kan itti muliifnee yeero kanaa. Ummanni Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Iluu Abba Boraa fi Jimmaa mana qubataa ijaarudhaan, biddeena oo’aa mana isaati fiduudhaan, eddo tokko tokkottimmo saawwa dhaltii dabarsee keennudhaan waan ajaa’iiba tayee tokko hojjatee jiraa. Hojiin kuni halkani fi guyyaa toyannaa cimaafi, bakkatti (eddotti) argamuudhaan kan hojjatameefi hirmaannaa Saba Bal’aatiin kan milkaaye, caasaan Oromiyaa halkaniifi guyyaa karaa ijaarudhaan, bishaan baasudhaan, Kiliinika horiitifi kan namaa ijaarudhaan, ogeessi ufi isaati itti amanee eddoolee kanatti argamee akka hojjatu taasiisudhan wanta seena qabeessa taye raawwaanne jirra. Ar’allee, Ummata Oromo kan qubateefi kan qubachiisee, hojjattootaafi hoggantoota Oromoo aarsaa kaffalani Ummata keenna baraaraan galata guddaa galchaafi. Ijoon dubbi kanaa; yeeroo kamiyyu, yo rakkoon si mudatuu, abbaa falaafi abbaa malaa kan tayee Saba bal’aa Amani, Sabatti uf kenni, ajajuu oso hintaane yaada isaa irraa fudhadhuuti hojitti geeddarii, Ummatatii uf kenni. Kuni hojii kamiifu, yeero kamiyyu, eddo kamittu nihojjata jedheen amanaa.
Rakkoon inni biraa cimaan naqunnamee turee haala siyaasaa Oromiyaa kan ilaaludhaa. Akkuma asi olitti tuqeetti yeero lola Ertraafi Itophiyaa jiddutti adeemsifamaa tureerra ka’ee, paartii biyya bulchaa turee jiddutti rakko siyaasaa umameen, keessa keessa dubbiin danfa’aa dhuftee motummas haalan dadhabsiisaa kan fidde yo ta’u, Oromiyaa keessatti mormiin barattootaa garmalee cimaa akka turee niyaadatamaa. Bara 1999 yookiin 2000(?) keessa bosona Baaleefi Gujiitti ibiddi qabatu waliin walqabatees sosochiin barattoota Oromoo heddu owwaa turee. Bara 2001-2003ttis sochiin kuni keessattu godinaale gara lixaa jiran (Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaafi Lixaa) keessatti rakkoo turee. Rakkoon yeeroo sanii akka ammaa kana, gadi bayu dhorkamuu ijollee oso hintayiin jeequmsa adda addaa toyachuutu rakko turee. Barattoonni mannen barnootaa fi qabeenna adda addaarratti miidhha geessaa turan akkamitti toyanna kan jedhu motummaa reefu debi’e dhaabbata jiruuf qormaata guddaa turee. Fakkennaf Magaalaa Walisootti kan argamu, manni barnoota Garasuu Dhukii gubachuun ni yaadatamaa. Haala kana keessatti gara tokkoon sochi ijoolle kana toyachuun akkasumas toyannaa kana keessatti miidhaan namarra akka hingeenne godhuun akkamitti dandayama kan jedhu dubbi hamaa akka tayee namni hundi hubachu nidandayaa. Kanarraa kan ka’een tooftaan ani itti fayyadame (1) sochiin ijoolle harka keenna ala akka hinbaane tooyachuu, yeerodhaaf ijoolle eddo muraasa tayanitti qabani tursiisudhaan spoorti hojjachiisani gadi lakkisuu akka filannoo tokkotti fudhadhee. Hanga ani beekutti haala kana keessatti ijoollen hidhamte torbaan 4-5 yeero hincaallef qofa akka tureedha; (2) dhimma ijoollen kaasan qabanne gara Ummataatti deemudhaan ijoollefi Ummatichaa mariisisuudhan rakko furuu, (3) pooliisiin Oromiyaa nama akka hinajjefneefi akka hinmadeessiine ufeggannoon ol’aanaan akka godhamu taasiisuu, (4) poolisiin Oromiyaa muxannoo jeequmsa toyachuu waan hinqabneef, yeero jalqabaatiif biyyatti keessatti humna jeequmsa bittinneessu (Riot Police) nama 500 ijaarudhaan meeshaan waraanaa dirree hiriiraa kamiyyu akka hinseenne taasiisu, (5) hidhamtoonni mana hidhaa Oromiyaa jala jiru hunda keessa jiran akka hintumamne qajeelfama cimaa poolisi fi bulchiinsa mana adabaa/hidhaatiif dabarsuufi kkf raawwachuudhhan balaan caalu akka nuhinmudanne taasisuf hojjadheen jira. Fakkeennaaf Bulchiinsa Motummaa Ummattota Kibbaa keessatti mormii Ummanni Sidaamaa Magaala Hawaasaa irratti kaaseen guyyaa tokko keessatti namni 25 akka du’e niyaadatamaa. Garuu Oromiyaa walakkaa keessatti (Lixa Oromiyaa guutuu) jeequmsii yeeroo dheeraaf adeemsiifama turee, balaan guddaan oso hinqunnamiin kan dabreef iccitiin isaa maali, jedhee namni hundi yaadu nidandayaa. Ijoolleen Yunivarsiti Finfinnee Biiroo tiyyatti dhufudhaan akka fedhanitti yaada mormii isaani dhiyeeffachaa akka turaniifi mariilee babal’aa adeemsiisaa akka turrefi nagayaan addaan akka deemaa turre beekkamu qabaa. Kana keessatti hanqinaafi dogongorri hinturre jechu kiyyammo akka hintaanee namni hundi akka naaf beeku gaafachaa eddo isatti, barreeffama kana keessatti akka kaasu nan mirkaneessaa.
Yeroo ani bulchaa tureetti hidhamaan mana hidhaa keessa jiru rakko dhiphiina eddo, rakko nyaataafi saaniteeshinii qabaachaa turani. Kuni durumarraa kan dhaalameedhaa. Haala manneen hidhaa keessa turan foyyeessuf hanga dnadayametti tarkaanfiwwan kanatti aanan fudhadheen turee; (1) bara 2003 namni 5800 akka dhifatamaan gadilakkifamu, bara 2004mmo 3500 akka galakkifamau taasiisneerra; kuni immo seenaa biyya sanii keessatti (keessahu sirna kana keessatti) kan jalqabaa turee, (2) mannen hidhaa hedduurra deemuudhaan ilaaluu, hidhamtoota waliin marii gaggabaabaa adeemsiisu, (3) manni fincaanii, dhiyeessiin bishaan dhugaatitiifi kan dhiqannaa akka dhiyaatuu taasiisuu, (4) eddoon midhaan itti bilcheessan akka foyya’an taasiisuu, (5) nyaata hidhamtootarratti jijjirama guddaa taasiissu fi kkf raawwatamaniru.
Dhiimmi biraa rakkisaan hanga ammaa hinfuramne dhimma Magaala Finfinneeti. Isa kana qorachiisuuf yo yallelle, dubbichi dhimma seeraa oso hintayiin dhimma siyaasaa tayuun isaa adeemsaan hubannee. Finfinneen lafa Tuulamaa, lafa weerara diinaatiin qabamtee, lafa Ummanni Oromoo Tuulamaa kuma hedduun laakkayamu lola yeero heddu (Eekkatti, Gaara hexootti, Gullalletti, Ejereetti) adeemsiifameen irratti dhumeedhaa. Qe’een Oromootaa, guututti ibiddaan barbaadaye, qabbenni isaa guutumatti saamamedha. Finfinneen AWWAALA Oromoo irratti ijaaramtee. Finfinneen handhuura Oromiyaa qofa oso hintaanee, seenaa Sabni nagaya biyya ufii keessatti mirga lubbuun jiraachuu dhabee itti dhume qabdii. Dhiigni namaafi looni weerartootaan gadi naqame akka bishaani laga keessa akka ya’aa ture seenaan nimu’lisaa. Dhimmi akkanaa, dubbi ogummaa seeraatiin hikkamuu oso hintaane, deebii siyaasaa qofaan akka tayee beekudhaan, haala yeeroo san tureen (ammas ni hammaatee malee wanti foyya’ee hinjiruu), gutumattis tayu dhabuu, akkamitti furmaata xixinnaa keennuun dandayama ka jedhu ilaallee turree. Haaluma Kanaan, (1) bulchaan Magaala Finfinne nama Oromoo akka tayu (mayor of the city), (2) mana marii bulchiinsa magaala Finfinne keessa barcuumaan %25ni Oromoodhaaf qofa akka hambifamee Motummaan Naannoo Oromiyaa namoota dandeetti qaban Magaala Finfinnee keessayis tayee Oromiyaarraa waldorgoomsiisee akka ramadu, barcumaa hafanirrattis namni Oromoo namoota saba biro waliin waldorgomee yo filatamee eddo qabachuu akka dandayu, carraan banaa akka tayu, (3) galii Magaalli Finfinne galchiitu keessaa %10-20 tayu Oromiyaadhaf akka galu, (4) xurii, hasbaafi shama Finfinnee keessa gadiyaa’u warshaaleen hundi fayyisani (treated waste) malee akka gadi hinlakkifnee akkasumas manni qopheessaa, xurii fi kosii goggogaa seera egumsa naannoo eggateen akka maqsuufi Buulchiinsa Motummaa Naanno Oromiyaa waliin akka hojjatu kan jedhuuf kan biroolle akka mariatamaa tureefi wixineen yaadaafi seeraa akka dhiyaataa turee ninbeekaa. Kannen hunda keessa laakkofsa 1ffa jalatti kan tuqe qofti hojirra yoo oolu kan hafan akka hojirra hinoolles ninbeekaa. Rakkoon Siyaasaa Finfinnee Rakkoo Siyyaasa Ummata Oromootiin addaan baafame ilaaluun akka hindandaymnee adeemsa kana keessatti baradheen jiraa. Hanga sani bulchiinsi motummaa Oromiyaa Magaala Finfinne keessa akka turuu, dhimmoonni Oromummaa agarsiissan tokko tokkos akka ijaaraman, fakkennaaf manneen barnoota afaan Oromoo, jiddu gala aadaa Oromoo…. Kannen keessayis wanti jalqabame yo jiraatelle harkifannaafi foqooqaa akka tayee amanuun barbaachiisaadhaa.
Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. Ummanni Oromoo gaafa ani Oromiyaa turee (2001-2005), %89 baadiyyaa keessatti bittinnaayee jiraataa. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. Magaalli lafa siyaasaan, daldalli, walqunnamtiifi odeeffannooon baliinaan keessatti argamuudhaa. Caasseffama (socio-economic hierarchy) hawaasoota biyya guddataa jirani keessatti magaaloonni mataa yoo tayan badiyyaan isaani gadidhaa. Ummanni Oromoo, Magaalota keessaa akka ari’atamu, magaaloonni lafa hidhaa, lafa afaaniif aadaan isaa itti qaaneeffamu, walumaagalatti biyya isaa oso hintayiin akka waan biyya ormaa dhaqeetti akka itti dhagayamuu godhamani ijaaramani. Bulchiinsii, ilaalchii, amantiin, propogaandaan midiyaale, qaani tokko malee waggota 136f ololaafi maqaa balleessaa Orommoorratti adeemsiisaa turani. Bara 1991 booda erga bulchiinsii naannolee ijaaramee kaasee, Magaaloota Dirre Dhawaafi Finfinnee malee kan hafan Oromiyaa jalatti akka bulan yo taasifamu, ummanni magaaloota kana keessa jiru garuu garri caalu Oromoo waan hintayiiniif rakko ifatti mul’atu akka ta’ee hubachuudhaan Ummanni Oromoo magaaloota Naanno isaa keessa jiranitti akka galu yaalii godheen dhiibbaan ifaafi ifa hintaanee narratti adeemsifameeraa. Projeektiin kunis akka fashaalaayu taasifamuun isaa dhimma gadda guddaadhaan yaadadhuudhaa. Sababni isaas, Oromoon lafa qotee, horii horsiisee qofa ummata biro kan magaalotaa fi kanafu, siyaas-dinagdee isaa toyatu qallabuun yakkaa jedheen waan amanuufi. Ummanni Oromoo ar’aa oso hintayiin bara 1990mman keessa magaalota isaa toyachuu qaba turee. Ummata Oromoo biyya keessa jiruufi daayaasporaa adda addaa akka biyyatti galee lafa fudhatu yeero jalqabaatiif anatuu yaali godhee. Yaanni kiyyas kan maddu, lafa Oromoo gurguruuf oso hintaanee siyaas-dinaggee magaaloota isaa akka inni toyaatuuf turee. Haluma amma jiru keessattis dhimmi sirrifi mirga ennuyyu oso hintuqnee mirga Oromoo kan tarkaanfachiisuu dandayu ajandaa ebbifamaa turee. Kuni danqaa siyaasaa fi dhiibba bal’aafi olola dubbi micciruutiin fashalaaye. Kuni aangoo Motummaa Naanno Oromiya fi mirga OPDOti turee; garuu hintaanee.
Dhimmi biro dhimma Jimaatii. Jimaan, keessayyu kan baha Oromiyaa amma sadarkaa lammaffarratti sharafa biyya alaa kan galchiitudhaa. Jimaa tana garuu, Oromoon keessatti miskinayee, gadadoofi hiyyuummaadhan jala deeme omishuu, gaheen inni keessa qabuu, heddu xiqqaadhaa. Saamtoonnii (motummaafi motummaa alas kanjiran) adda addaa daldaltoota Oromoo hintayiin waliin waltayuudhaan Oromoo dhiiga isaa xuuxaa jirani. Kana jijjirudhaaf qonnaan bulaa godinaalee Hararghee lamaan keessa jiran waldaya gamtaatiin waliitti ijaarudhaan gandi hundi waldaya tokko akka qabaatu godhuudhhan waldaalee godina lamaanimmo Yuniyeeni (union) Humbanaa-Carcar ijaarudhaan sosochi abdi nama keennu uumnee turree. Haa tayu malee, caasaan hannaan xaxamee daldaltoota saamtootaa Oromoo quncifachaa jiraniin waliigaludhaan Yuniyeeni keenna akka diiggamuufi waldaaleen b’uuraas akka diiggaman taasifamu isaa, gadda zamanni hinshaarren yaadadhdhaa! Rakkoon Jimaa Oromiyaa dhimma Ijoo siyaasaati malee dhimma daldaalaa, kan teekinika akka hintaanees hubadheen jiraa. Jimaan qabxii qabsoo Oromoo keessaa isa tokko akka tayees niinamanaa! Ragaa Oromoon qabeenna isaarratti abboomu dadhabuu Jimaafi Bunaa ol wanti dhiyaatu akka hinjirree, qabsaayeen, hojjadheen argeeraa.
Dhimmoota dogongoraa fi dhiifama irratti Gaafadhuu:
Bara 2001-2012tti motummaa amma biyya bulchaa jiru kessatti eddo gara gararratti sadarkaa gaggeesummaatti hojjadheen jiraa. Yeroo kana keessatti dhimmota imaammataa fi dhimmota seeraafi siyaasaas dabalatee murtilee gurguddo murteesseen jiraa, yookaan immo akka murtaayan sagalee kiyya keennudhaan qooda keessatti fudhadheen jiraa. Kuni, motummaa naannos tayee motummaa feedeeraalas nidabalataa. Murtilee kana hunda isaanituu Ummanni Oromoos tayee Umaanni biyyatti akka miidhaman, akka badan, akka cunqurfaman yaade murtii kamiyyu murteessu baadhuulle, murtileen ani murteessefi akka murtayaan ani gargaaree Ummattooto biyyattifi Ummata kiyyas (Ummata Oromoo) kan miidhan yo jiraatan hal duree tokko malee dhifaman gaafadhaa. Ani ilma qonnaan bulaa, haccuccaafi hiyyummaan baadiyya maal akka taate beeku, Ummata waggota 136f mirga isaa gonfachuuf qabsaayu keessaa bayee. Ilaalchi kiyya yoomiyyu hawwi Ummata Oromootiin addaan hinbayuu. Murtiwwan ani raawwadheen Sabni bal’aa fi namoonni dhuunfaas kan waliin hojjadhees taye hojjachiise kan miidhaman yo tayan dhiifaman gaafadhaa.
Bara 2001-2003 ykn 2004 jeequmsa barattoonni kaasaa turan keessatti hanga ani beekutti barattoonni lama rasaasa poolisi Oromiyaatiin du’un isaani ni beekkamaa. Haala asi olitti baliinaan ibsee sana keessatti of eggannoon ol’aanaan fudhatamulle garuu, dogongoronni akkanaa dhabamu waan dandayan hinseyu. Mgaala Shaambuutiifi Magaala Amboo kessatti akkuma rakkoon kuni umamuu dhagayeen poolisooni dhukaasa kana banan to’annaa jala oolani akka seeratti dhiyaatan yo taasiisu, gara biraatiin Gumaan Lubbu waarra ijolleettif oso oolee hinbuliin akka kafalamu taasiiseen jiraa. Tayulle lubbuu namoota dabraniitiif haal duree tokko malee dhiifamaan gaafadhaa.
Barattota Yunivarsiti Finfinnee 300 tayan kan arisiisee Juneeydidha jedhame kan haasayamee citu didee hanga ar’aa deemaa jiru kijiba adiidhaa. Ijollee kana kan ari’ee motummaa Fedeeraalaati. Dubbiin oo’itee jennaan warri feedeeraalaa gara keenna darbatee. Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo Yunivarsitii keessa jiran hundi akka waan ari’amanitti waan ololfameef deebii gara midiyaatiin ani akka keennu OPDOn murteessee. Haaluma Kanaan gabaasa warri fedeeraalaa gara keenna ergeerratti (ijolleen foodda layibraarii caccabsuu, sirni baruufi barsiisuu akka gufatu taasiisuu, preezidanticha Yunivarsiti waajjira isaatti marsuudhaan guyya walakkaaf (hotage) godhuufi kkf) hundaayudhaan ibsa kennee turee. Ibsi sunis (1) namni Oromo Yunivarsitiwwan saddettan yeero san turan keessatti baratu kuma 10ni ol akka taye, (2) ijoolleen kuni karaa nagayaatiin mormii isaani dhiyeffachuu oso dandayaan qabeenna caccabsuufi preezidaanti hostage godhani qabachuun sirri akka hinturrefi murtiin motummaan fedeeraalaa fudhate sirridha kan jedhu turee. Kanarratti dogongorri kiyya akkataa ibsa san itti kennedha malee murtii keenname sani anis tayee OPDOn jijjiruu hindandayu turee! Hinbeekus turee! Murtiin ariisaa ijoolle sanis murtii siyaasaa turee malee murti bulchiinsaa hinturre. Murtii qaamni biraa murteesserratti ibsa akkasi keennuun kiyya dogongora akka tayee bara 2005 Baatii Adooleessa barattoota Yunivarsitii, kumaatamatti laakkayaman baati tokko oliif, Hadamaarratti OPDOn leenjisurratti, guyyota 5nif anis qooda fudhadheen, achirratti barataaf haala kana ibseefi gocha oso hintayiin jecha kiyyaf dhiifama gaafadhee barataan guutuun gammachuufi oo’ina guddaadhaan harka dhayee narraa fudhateera. Ani nama barnoonni Oromiyaa gandoota 6500 keessatti akka diriirfamu taasiiseedha. Bara kiyyaa, hojiiwwan hojjataman keessa inni guddaan mannen barnootaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa akka walgayan, Oromoon humna isaatiin, qabeenna isaatiin, mana barnoota akka ijaaruu, mana barsiisota baadiyya akka ijaaruu, manneen barnnotaa akka qabeenaa ufitti fudhatee akka qooda keessattis fudhatuu Ummata Keennatti warwaadheen amansiisee hojii guddaa hojjadhee jiraa. Oromoon waggaa dhibbaf akka farda lugaamame bishaan taliila yaa’u dhuguu dadhabee bira dhaabbatutti barnootarraa ittiifamee turee; amma garru seenaa kana hajijjirru jedheen Ummatati booyee, boochisee haala jijjiree. Ar’aa “dhaloota qubee” jedhamee kan waamamu kuni kan ardii Oromootirra oldammaqee Oromummaa finiinsaa jiruu kuni qabsoo hadhaawaadhaan dhufee. Bara san bara barsiisaan paantiitti deebi’ee Chalk ittin barsiisuu lafa kaayee dhoqqee dhiitee mana maarigee/laambubeedha. Barri sun, bara Oromoon guyyaa tokkotti mana barnoota sadarkaa tokkoffa itti ijaare fixu turee, barri sun Oromoon qabeenna ufi baasee, baati 3 fi 4 keessetti mana barnoota sadarkaa lammaffas tayee kan BLTO xumuratee biiro tiyyaafi biiroo barnoota Oromiyaas dhufee barsiisaa nukeenna jedhaa turee, barri sun bara mannen hirriba kollejjotaa gara kutaa barnootaatti jijjirre ijoollef immo qarshii nyaataafi kiraa manaa kafalle Oromiyaa keessatti raajiin hojjatameedha. Asirratti hojii guddaa akkanaa kana kan hojjadhee kophaa kiyya miti. Bu’ura Obbo Ibsaa Guutamaa bara ce’umsaa lafa kaayeerratti hogganoota Biiroo Barnoota Oromiyaa kan yeerro adda addaa hundayyu (Mulugeetaa Ammannaa, Birhaanuu, Yohaanis Gendaa, Haaruun Hussen…) dhamaatii isaanitiif kan galatoonfadhu yo ta’eyyu, Obbo Darajjee Asfaaw kophaattiin yaadadhaa. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. Kanaafi Ummanni Oromoo bal’aan kan biyyafi biyya ormaa keessa jiru haqa turee, hanqina tureefi haala turee yaada keessa galchee murti isaa akka keennu isaaf dhiisaa.
Dhimmoonni biro kan midiyyarrattis tayee waltajjii adda addarratti dubbadhee mala qaroomina walqunnamtiitiin (communication science) kan hindeggaramne akka tayee ninbeekaa. Haala Kanaan jechoota nama hinharkifne, kan nama waraananiifi kan nama dhuunfaas tayee Saba tuqaan jiraachuu nimalu. Jechoota faallaa mirga Oromoo tayani mul’atan hundaa, Ummanni akka irra naaf taru gaafadhaa.
Bara 2012 rakko babal’aa Ummata Musliimaatiifi motummaa fedeeraalaa jiddu tureerratti ana ilaalchiisee walhubannaa dhabiitiin akka umamee ninbeekaa. Ani Oromoodha. Oromummaan mallatto ennummaa kiyyaatti. Ani Muusliima. Kunis ennumma kiyya. Rakkoo deemaa turtee keessatti (hiikudhaaf) kan qooda fudhadhee gara baatii Gurrandhala, 2012ti. Ijjannoon kiyya, (1) ummanni musliimaa bakka lamatti walqoodee walfixuun irra hinjiraatu, kanaafis ummata kiristaanaa Ortodooksii, Kaatolikii, Protestaantii ilaalaa, yoo walihingalles garaa garummaa keessan walif kabajaati jiraadhaa kan jedhu, (2) waajjira majiliisa Islaamatiifi warra Towhiida jedhaman walitti fidudhaaf yaalli godheeraa, (3) haala yeero sana tureen kana godhuun kiyyas paarti biyya bulchaa jiruuf waan gaaridha malee hamaadha jedhee hinyaannee, (4) haalli biyyatti keessa turee rakkisaa waan tayeef (mummichii ministroota dhibee keessa waan tureef, yo inni fayye galee anatu isiin fuudhee biraa dhaqnee waan barbaaddan gaafattani. Hanga sani ummata tasgabeessa kan jedhu ture). Ani kana godhaa kan tureef namoota muusliima tayan kan kaabinee feederaalaa keessa jiran gara 7 ykn 8 tayan keessaa, isaan caalaa muusliima tayee oso hintayiin dhimmi ummataa, yeeroo kamiyyuu waan nadhibuuf cal jedhee ilaaluu hindandeenne. Garuummo, Yaaliin kiyya gara motummaatinis tayee gara ummataatiin ija gaariin hin’ilaalamnee. Asirratti amanti Ahbash jedhamtu kan Shek Abdalla Adareetiin biyya Lubnaan (Lebanon) irra hogganamtuf gartummaa agarsiiseen turee. Sababnis, ani (traditional Islam) kan jedhamu hordofaa waanan tureef, amantiin Jaarsi kuni oofus Kanaan walitti waan dhuftuuf turtee. Haa tayu malee, ani ummanni musliimaa kan Towhidaa amantii isaa hinadeemsifatiin jedhee gaafa tokkos dubbadhee hinbeekuu. Warri matooti amantii kanaas kan Oromoo tayan hundaayyu ninbeekaa. Gartummaa Ahbashi agarsiisuu kiyyaf garuu, dhiifaman gaafadhaa.
Dhimmota sirrayu qaban:
Ani hanqinoota heddu nama qabuudhaa. Muxanno hojiifi ogummaa adda addaa heddu yo qabaadheelle, ammas hanqina heddu akkan qabuu nama ufbeekudhaa. Kanaafu yeero hundaa waltajji jireennaafi qabsoo kamirrayyu dafee barachuudhaaf yaalii taasiisaa tureera. Kanaaf hanqinni akka narra jiru barudhaan hojiifi adeemsa kiyya foyyeessuf carraaqaan ture ammas ittiin jiraa. Haa tayu malee, ololoota akka faashisti ani tayeetti oofaman ninbalaaleefadhaa! Ani nama waan fascism taye bareechee beekudhaa. Ani, naanno yoon bulchaa tureefi fedeeraala keessa yeeroon hojjadhutti nama Oromoos tayee nama biraa tokkolle, eddo kamittu akka ajjeefamu karaa ifa tayeefi karaa dhoksaa tayeenis wanti tokko ani raawwadhee hinjiruu. Ittis hinamanuu. Kana malees yeroon ummata Oromoo bulchaa turee, Ummatatti ufkenneeti hojjadhe malee ummatarraa uf hinqabnee. Diriirfadhee taaiitaa ooisaa hinbaanee. Gandoota Oromoo dhaqabuudhaan, qe’ee isaa oso hinyaadatamne dhaquudhaan, mana isaa seenuudhan, urgaa isaa urgeeffachuudhaan waggota afran dabarsee. Yo biiroon rakko fiddus, gara baadiyyaa deemaan turee. Baadiyyaa yo deemu ninfayyaa! Fakkeennaaf yeero tokko Magaalaa Mandii- Wallagga Lixaa keessatti, hojii ilaaluf yeeroon deemu waraanni biyyaa, naannawa sana jiru hidhanno guutuu qabatee ummata bayee karaa gamaa gamana dhaabbatee nasimachuuf bayerratti, fuulaan itti garagalee qawwee gara ummataa qabee animmo jiddu sana akka dabru qophaayee turee. Battalumatti, waraanni kuni asi ka’u malee lafa daaw’annaa san hindeemu jedhee diduudhaan namicha basaasaa naanno sana jiruun hatattamaan akka kaasu itti himee. Innis nageenna keetiif jennaan, ani ummata Oromoorra uf hineeguu, waan ummata Oromoorra dabreemmo humni dafee dhaqabaa Oromiyaa (kan Yoonaatanniifi Dirribaa Aariqoo leenjisan) nama 10ni gadi kan hintaaneetu nawaliin jiraa. Eegumsa warana biyyaa, Oromiyaan hingaafanne jechudhaan waraanicha kaasiiseen ummata keessa miila kiyyaan deemee, harka fuudhee, waliin nyadhee dhugee, Oromummaa agarsiiseen Oromummas argeen galee. Mandiin lafa hoggansi OPDO hanga guyyaa sanitti dhaqee hinbeekneedha. Lafti sun, lafa hoggantoonni ABO tokko tokko itti dhalatan waan taateef akka lafa ABOtti fudhatamtii. Edoo kamittu, yeeroo kamiyyu Ummata Oromoorra hinqoollifanne. Oloola maqaa balleessaafi ennumma namaa biyya faranjii, biyya iftooma qabduu keessa ta’aani oso haqaafi dhara addaan hinbaafne namarratti duuluun Oromoo diiguudha jedheen abaaraa.
Waayee amantirratti Sheekkota areeda dheeraa qaban isinirra haada jedheeni; jedhamee saalfii tokko malee warri oduu kana gadidhiisuu, ammas Ummata Oromootiifi ana waldhabssiisuf warra carraaqudha. Warroonni kunimmo biyya keessafi (caasaa motummaa keessafi isaa alas) biyya alas warra jiran akka tayee ninbeekaa. Ani warra amantii dhiisiti nama kamiyyu, garaa garummas yon qabaadhees nama kabajudhaa. Kanammo Sabni bal’aan nibeekaa. Caasaa OPDO keessatti namni biiroo isaa Ummata Oromootiif yeeroo jalqabaatiif bane anadhaa. Qonnaan bulaan, hojjataan, warrii amantii, hiyyeessi, dureessi, dhiiraafi dhalaan, diqqaafi guddaan biiroo tiyya hindhufne hinturree. Namni kaffalti geejibaa gara biyyatti galuun dhabees na bira dhufaa turee. Mahallaqa kiisii tiyyaa fixeen hojjattoota na gargaaranirra liqeenfachaa akka turee, gaafa tokko ragaan kun ifa tayaa.
OPDO ilaalchisee yaadonni keennaman addaan baafamani ilaalamu qabani. Yaada kana kaniin kennuf OPDO “defend” godhuufi miti. OPDOn kan ijaaramtee TPLFn akka tayee OPDOn mataa isii waggoota 20 booda amantee jirti. OPDOn sabbonummaa Oromummaa qabuufi kan hinqabne akka jiran beekkamu qabaa. OPDO keessa akka namni alaa ilaalu oso hintaanee qabsoo hamaatu gaggeefamaa. Qabsoon kunis Oromummaafi waan Oromummaa hintaanee jiddutti adeemsifamaa. Miseensi OPDO sababa adda addaatiin kumaatamaan ari’atamu, hojii ala tayee waan nyaatu dhabee kararratti kufuu, kan mana hidhaa keessa jirus baay’eedha. Fakkennaf, hattertaa jedhamee kan gadi aanu, mana hidhaatti kan darbatamuuf waan Oromumma cimaa agarsiisuufi. Hanna Yoo ta’ee akkuma biyyattitittu, rakko hikkamu hindandeenne keessa erga lixame tureeraa. Kanaafi humnii biyya alaa jiru, OPDO yo xinnaate miseensa miliyoona 3 qabuu, kana keessa %80 qonnaan bulaa keenna waraqaa ennumma argachuuf miseensoome, akkasumas sabbontoota jajjaboo, OPDO rakko qabu waliin moyyee takkatti naqani akka midhaan findigoo, findiguun dogongora waggota 25niif irraa baratamu dadhabameedha waan tayeef, sirrayu qabaa jedheen amanaa. Goota, goota haqqisuu; sabboonaa bobayaa buluu, haala rakkisaa tayee keessatti aarsaa garmalee kaffalaa kan jiru akka lafarra jiru beeknee yaadaan gargaaruun Oromummaa cimsa malee hindiiguu, hindadhabsiisu, hinballeessu.
Ani biyya tana ergan gayee waggota lamaa. Yeroo kana keessatti haala daayaspooran keessa jiru hubachuuf yaalaan jiraa. Yeeroo kana keessatti namootaa adda addaa waliin bilbilaan haasayuudhan karaa Oromumman itti cimtuufi tokkummaan Ummata keenna itti jabaaturratti yaada kiyya laadheen jiraa. Yeeroo amma kanatti dhaaba siyyas tayee garee siyaasaa kamiyyu keessa kan hinjirreefi qo’aannaa fi barnootarra akkan jiru ibsuun barbaadaa. Kanuma waliinis, Oromoon daayaaspooraa keessa jiru eddo dhalootaafi qoomoodhaan walqooduun isaa, dhimma Oromummaa ifatti miidhu tayuun isaa beekkamuu qabaa. Qomoon Oromoo hundinuu, faaya keenna. Faayaa kana tuttuquun, walii dabarfachuu dhabuun, ufeggannoo malee jechoota nama miidhan akkuma fedhan qomoo tokkorratti ykn kan biraarratti darbachuun waan nu diigudhaa. Muxannoo kiyyarraa wantiin argee, Oromoo morma walqabatee walitti booyuu malee Oromoo walirratti duulu miti. Biyya keessatti haalli kuni hinjiru jechuun nidandayamaa. Qaawwa hintaanee ufi ufitti bannee waan ufdadhabsiisnee natti fakkaataa. Kanaafu hojii namni hundi foyyeessuu qabu jedheen amanaa.
Juneeydii Saaddoo Cirrii
Bitooteessa 5, 2016
Previous Sarootiin wayyanee lama hojiirra arihaman jedhu
Next #OromoProtests Walaloo Sodaa Injifadhaa!
A very long resume. It would be nice if you list in a point form only what you did to your people and apologize for it. The heading says that you are apologizing. Oromos are not interested in your long resume that only shows how long and well you served their enemy. You did not even think about where you came from and those poor people who sent you to England so that you study. We know you did absolutely nothing for your people. So, why don’t you just tell us what you did to them and ask for forgiveness. Asking for forgiveness does not start with one’s resume especially if the resume is irrelevant.
Thank you for the critic. Apologies are not just for the sake of saying them. They must be a profound belief that comes from your deep mind and heart and I did that. If my paper seems like a resume, it is regrettable, but i hope you know that things must be explained.
Obbo Junedy. haala urmi keeysanii akkuma gaaritti lafa keesan. Garuu odoo akka yeroo biyyaa baataniin ta’e gaarii ture. haala jireenna keeysanii akkuma lafa keeysanitti maaf miidhaa diinni ummata oromoo irraan gahaa turee fi itti jiru lafa kaayuu hanqattan? akkuma san namoota itti balleesse jettanii yaaddan osoo dhiifama gaafattanii irraa hin wayyu?
Jjechoota jedhuu hinmalle, dubbadheerratti dhhifama gaafadheen jiraa. Hojiin ani dalagee, heddudhaa. Sana hunda asitti dhiyeessuu hinbarbaaduu. Ummanni biyyaa nibeekaa, seenaanis nibeekaa. Wanti asitti dhiyaate, dhimmota lakkofsaan xinnoo tayan qofaadhaa.
Dhiifama kaniin jedhu, ummata bal’aadhani. Namoonni dhuunfas kan miidhaman, hojiif jecha walitti buiinsa umame yo jiraate dhiifama jedheen jira. Kan beekkamu qabuu garuu, nama miidhudhaaf, hawaasa balleesudhaaf, nama dhuunfaa dhabamsiisudhaaf, ajeesuf, hidhuuf murtiin ani murteesse hinjiru. Namoota Musliima kan hidhe ana miti. Gahee tokkolle keessa hinqabuu. Ijolle barattootaa bara 2003 ykn 2002 kan hiine akka waraqaa kiyya keessatti barresetti yeeroo gabaabaadhaf qofa akka tureefi jeequmsoota turan toyachuf qofa akka ture irra deebien ibsaa.
Garuu namni dhoksaanis tayee ifatti akka ajjefamu, dhayamu ykn dhabamu, ykn mana barnootaafi hojii keessaa ariamu ani murteesse tokkolle hinjiruu. Sobaafi jibbaarraa ka’ani walirratti ololchuun sirri miti.
gochaa dugguuggaa sanyii oromoo irratti wayyaaneen hojjachaa jirtu maaf moggaa deemtu. dhugaa yoo dubbanne isin wayyaaneef hojachaa turtan malee aangoo waa murteessuu qabaataa hin turre. ajaja qofaa geessaa turtan. qaama ajaja isinitti kennuudhaan akka dogoggora keessa galtan isin taasise wayyaanee maaf hujii isii akkuma keessan ibsitanitti kan isiillee gadi afuu maaf sodaattan? ammas ture hin jedhamu. mee gochaa wayyaanee irraa nuuf ibsaa
Obboo Juneeydii Saaddoo’s Letter of Apology
There are competing interests both for and against Obboo Juneeydii Saaddoo’s letter of apology to the Oromo people for what might have been his mistake during his leadership.
I held back my personal response to make sure that I understood what might be the basis for some of the grievances from the larger diaspora population who might have known him better than I did. The comments kept pouring, but there did not seem to be an agreeable stand as to what must be done about someone who has taken the time to express his actions in detail and cared to apologize for what might have been his mistakes.
In my opinion, whether you agree or disagree with the content of his letter, Obboo Juneeydii has introduced a new set of spirit of accountability and responsible leadership by taking the time to own his mistakes and apologizing to the Oromo people. Irrespective of our emotional outburst in wanting to blame him for his tenure with the regime that we do not like, his expression of apology merits some consideration and genuine dialogue.
Mind you, this is not the first time we (the diaspora) hosted or received an ex-officio who worked with the regime, but the response to Obboo Juneeydii’s case does seem to be treated very differently. We have heard TV commentary labelling him as “Nazi” and also recent comments accusing him of genocide and killings. These comments are harsh and appear out of line. Accusations and comments against Obboo Juneeydii may inflame some nerves and could harm our internal cohesion as people. I suggest that we should hold back our over-the-top style criticism and look to some understanding to get to the bottom of our resentment, or otherwise. We should not treat Obboo Juneeydii’s case with so much vengeance, degradation and simplicity, and undermine what might have been his contribution in building Oromia’s institutions of today.
We have had individuals who were senior members of the security apparatus and the police force in Oromia who were responsible for the arrest and treatment of our people, but we did not refer to none of them as “fascists” or as such. Also, there were many Oromo leaders in the diaspora who have done grave strategic errors that have resulted in placing many lives in grave danger and caused major setback in the struggle of our people. Many even switched camps and formed alliance with those who reject the existence of the Oromo people outright, all without giving us a sense of explanation. These actions have resulted in dividing the diaspora population into several ineffective camps and weakened Oromo communities around the world. To say the least, Obboo Juneeydii is courageous enough to own his mistakes and admit that he was not and is not a perfect person. He deserves our attention.
Whether or not there is any credible fact that can support some of these accusations, I think this forum may not be the right place to pour out our hearts against one another, one of our own, be it good, bad, or otherwise. The online forum is neither Oromia’s court of law, nor judge and jury to pass a judgement. The ultimate judges are the people of Oromia with whom Obboo Juneeydii expressed his confidence and we should leave that to the people. If he has committed irreparable crimes against the Oromo people, he will have to answer directly to them at the right time and he will be judged for his actions.
Our people are dying today as we squabble over endless unhelpful divisive comments and this is the time for us to take good stock of our opinions and not let it be used by the enemy. We must understand that we cannot win this fight without uniting our people and recognizing the contributions of those who worked with the system and understand the heartbeat of the regime, its strength and weaknesses. Obboo Juneeydii has been with the system for over a decade in various leadership capacities and his knowledge can be of vital importance for the #OromoProtests and of immense value for the struggle of the Oromo people. This should be taken very seriously and should not be undermined.
We should welcome those who want to join our struggle and keep the doors wide open to those OPDO members and other Oromo who might want to come after him. We should not slam the door shut, but we should reach out to allow more dialogue and explanation that will unite our people.
Obboo Juneeydii, thank you for your courage, and I hope that you will engage with the diaspora and extend your knowledge and contribution in making up to the Oromo people. Together, we stand stronger!